पौराणिक कथा Lore | Top Slot Site | Mobile & Online £5 FREE | £€$800 Bonus :)
के तपाईं कहिल्यै चलचित्र ती महाकाव्य लडाई देखेको छ भने त तपाईं सहमत हुनेछन् यो सबै भन्दा राम्रो कार्य चलचित्र वर्गमा छ. पौराणिक कथा Lore एक स्लट खेल जस्तै युद्धमा अनुक्रम मा आधारित छ. यहाँ युद्ध भएको elves बीच छ, वेताल र orcs र स्लट सुविधाहरू प्रतीक रूपमा विभिन्न रोचक वर्ण. यो पाँच रील बेलायत स्लट मोबाइल खेल छ 25 को रील गर्न निश्चित छन् शर्त-रेखा. त्यहाँ खेल एक व्यावहारिक महसूस दिन्छ कि तीव्र युद्ध पृष्ठभूमिमा संगीत छ. यो स्लट पहाड र महल को पृष्ठभूमि मा सेट गरिएको छ, र यसको पंख मा रगतले एक पखेटा प्राणी नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ. यो सट्टेबाजी 25p साथ सुरु हुन्छ तर अधिकतम £ 62,5 एक स्पिन मा मात्र सेट गरिएको छ.
लेजेन्ड Lore विकासकर्ता बारेमा
यो तीव्र महाकाव्य युद्धमा आधारित स्लट खेल 1 द्वारा विकसित भएको थियो×2 गेमिङ (NYX). तिनीहरू अनलाइन क्यासिनो साइटहरु लागि विभिन्न स्लट खेल बनाउदा समृद्ध अनुभव संग अग्रणी खेल कम्पनीहरु मध्ये एक हो. आफ्नो खेल जस्तै मोबाइल र ट्याब्लेटको रूपमा विभिन्न इन्टरनेट सक्षम उपकरणहरूमा नाटक हो.
यो बेलायत स्लट मोबाइल खेल विभिन्न वर्ण को प्रतीक चार elvish नायक सहित विशेषताहरु. तिनीहरूले Arior छन्, कानुनी, Derec र Caldor एक लुटेरा को प्रतीक संग, ढोग & तीर, सुनको हतियार र एक पखेटा पशु. Derec सक्रिय payline मार्फत आफ्नो तरिका अवतरण पाँच मा 500x को उच्चतम खम्बा तिर्ने नायक को प्रतीक हो. त्यहाँ Elvish राजा नाम प्रतिनिधित्व तीन विशेष सुविधा प्रतीक हो Aliendor, राजकुमारी Silvertawn र Bonecrack नाम गरेका एक Orc.
Bonecrack बोनस: जब Orc को प्रतीक एक स्पिन समयमा तीन वा बढी पटक देखिन्छ, तपाईं बोनस राउन्ड मा लिएको हो. यहाँ अनियमित नायक एक swordfight मा Orc सामना देखिन्छ. राउन्ड को अन्त मा, तपाईं एक इनाम सम्मानित छन् आफ्नो नायक लडे छ कसरी राम्रो आधारित.
जंगली बोनस विशेषता: को योद्धा राजकुमारी, Silvertawn यो जंगली प्रतीक हो बेलायत स्लट मोबाइल खेल. यो हड्डी दरार बाहेक सबै आधार प्रतीक र राजा प्रतीक प्रतिस्थापन. एक payline मार्फत जंगली प्रतीक पाँच तपाईं गर्न एक खम्बा जीत दिन्छिन् 7500 सिक्का पनि.
स्क्याटर बोनस: राजा Aliendor यो को स्क्याटर प्रतीक हो बेलायत स्लट मोबाइल खेल. जब तीन वा यो प्रतीक बढी एक स्पिन समयमा मुलुकमा, तपाईं दस मुक्त spins सम्मानित छन्. यी spins बेला सबै winnings तीन गुना छ पोर्श छन्.
एक मनोरम ग्राफिक्स र सुन्दर विषय संग, यो बेलायत स्लट मोबाइल खेल सरासर मनोरञ्जन प्रदान गर्दछ. त्यहाँ तपाईं पनि जित्न सक्छौं कि बोनस पुरस्कार प्रशस्त छन्.